गहिरो निन्द्राका लागि के गर्ने ? – Etajakhabar
गहिरो निन्द्राका लागि के गर्ने ?
काठमाडौं – स्वस्थ तन र मनका लागि मीठो र गहिरो निद्रा अपरिहार्य मानिन्छ । पर्याप्त निदाइएन भने डायबेटिज, डिप्रेसनजस्ता रोग लाग्नुको साथै वजन बढ्ने समस्या देखापर्न सक्छ । मीठो निद्राका लागि यी टिप्स उपयोगी हुन सक्छन्ः
दिउसोको पेय बदल्नुस्
दिउसो चिया, कफीजस्ता क्याफिनजन्य पेय पदार्थ खाने गर्नुभएको छ भने दिउसो २ बजेपछि यस्ता पेय पदार्थ लिन चटक्कै छोड्नुस् । राति सुत्नुअघि चिया र कफी खाने बानी छ भने तत्काल आफूलाई सुधार्नुस् । किनकि, निद्र नलाग्ने समस्या भएका मानिसका लागि विशेष गरेर कफी घातक मानिन्छ ।
‘हेभी डिनर’ नलिनुस्
डिनरमा हेभी खाना खाने गर्नुभएको छ र पेट डम्म हुनेगरी अघाउँजी खाने बानी बसाल्नुभएको छ भने आजैदेखि बानी सुधार्नुस् । तरकारी, दाल, फलफूल, सलाद, दूधजस्ता हलुका खाना उपयुक्त मानिन्छन्, जसले मीठो निद्रा लगाउन मद्दत पु¥याउँछन् ।
सुत्नुअघि मदिरा नखानुस्
मदिरापारखीले सुत्नुअघि चुस्की लिए मीठो निद्रा लाग्ने ठान्ने गरेका छन् । तर, यो सत्य होइन । यसले तपाईंलाई छिट्टै निद्रा त लगाउँछ, तर केही घण्टापछि नै तपाईंको निद्रा भंग हुने, छिनछिनमा बिउँझिने समस्या हुन्छ । निद्रा नलागेको झोँकमा बढी मदिरा लिने गर्नुभएको छ भने आजैदेखि मात्रा घटाउनुस् । डेढ र बढीमा दुई पेगभन्दा बढी मदिरा नलिनुस् । सकिन्छ भने मदिरा छाड्नुहोस् ।
सुत्ने कोठामा मधुरो बत्ती राख्नुस्
ओछ्यानमा मोबाइल नचलाउनुस्
सुत्नुअघि कसरत नगर्नुस्
सुत्नुअघि औषधि नखानुस्
मनमा गुम्सिएका कुरा लेख्नुस्
कथा, संगीत सुन्नुस्
निद्रा लाग्दैन भने रेडियो, ल्यापटप, मोबाइलबाट मीठामीठा कथा, संगीत सुन्दै निदाउने बानी बसाल्नुस् । डाक्टरहरू निदाउने यो शैलीबाट धेरै मानिस लाभान्वित भइसकेको बताउँछसकारात्मक सोच राख्नुस्
खानपानमा ध्यान दिनुस्
सुत्नुअघि पानी नपिउनुस्
कसै–कसैले सुत्नुअघि पानी पिउने बानी बसालेका हुन्छन् । यस्तो बानी आजैदेखि बदल्नुस् । किनकि, पानी पिएर सुत्न जाँदा राति पिसाब फेर्न उठ्नुपर्छ । यसरी निद्रा भंग हुन्छ । सुत्नुभन्दा एक अथवा दुई घण्टाअघि पानी पिउने गर्नुस् । स्वास्थ्य खबरपत्रिका
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन ११, २०७३ समय: ८:५४:२७